तपाईंको परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि, जेसुकै अस्पष्ट चीजहरू जस्तो देखिए पनि हाम्रो दयालु परमेश्वर विश्वासी रहनुहुन्छ र हाम्रो सर्वव्यापी र मायालु उद्धारक हुनुहुन्छ। पावलले लेखेझैं कुनै पनि कुराले हामीलाई परमेश्वरबाट हटाउन सक्दैन र उहाँको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन: “त्यसोभए हामीलाई ख्रीष्ट र उहाँको प्रेमबाट अलग गर्न सक्ने के हो? पीडा र डर शायद? सतावट? भोक? गरीबी? खतरा वा हिंस्रक मृत्यु? पवित्र शास्त्रमा पहिले नै वर्णन गरिएझैं हामी वास्तवमै यथार्थ व्यवहार गर्छौं: किनकि हामी तपाईको हौं, प्रभु, हामी सबै ठाउँमा सताइन्छौं र मारिन्छौं - हामी भेडाहरूझैं काटिएका छौं! तर ...
भगवानले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ!
यो पत्र GCI मा कर्मचारीको रूपमा मेरो अन्तिम मासिक पत्र हो किनकि म यस महिनामा अवकाश लिदै छु। मैले हाम्रो सम्प्रदायको अध्यक्षको रूपमा मेरो कार्यकाललाई विचार गर्दा, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका थुप्रै आशिष्‌हरू मनमा आउँछन्। यी आशीर्वाद मध्ये एक हाम्रो नामसँग छ - ग्रेस कम्यूनियन इन्टरनेसनल। मलाई लाग्छ यसले समुदायको रूपमा हाम्रो मौलिक परिवर्तनलाई सुन्दर तरिकाले वर्णन गर्दछ। भगवानको अनुग्रहले हामी विश्वासको एक अन्तर्राष्ट्रिय, अनुग्रह आधारित समुदाय भएका छौं (कुराकानी) जुन ...
आफ्नो जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानको माध्यमबाट, येशूले मानवतालाई एउटा यस्तो मूल्य दिनुभयो जुन हामीले कहिले कत्ति धेरै काम गर्न, कमाउन वा कल्पना गर्न सक्दछौं भन्दा बढी छ। प्रेरित पावलले यसलाई यसरी वर्णन गरे: “हो, म अझै पनि यी सबै कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टको विस्मयकारी ज्ञानको लागि हानिकारक ठान्छु। उहाँकै खातिर यी सबै कुरा मलाई हानि पुगेको छ, र म यसलाई मलिन तुल्याउँछु ताकि मैले ख्रीष्टलाई जित्न सकूँ "(फिलिप्पी::))। पावल जान्दछन् कि परमेश्वरद्वारा ख्रीष्ट मार्फत गहिरो सम्बन्धको एउटा असीम - अमूल्य - मूल्य छ ...
त्यहाँ जहिले पनि भविष्यवक्ता हुँ भनेर दावी गर्ने कोही हुन्छ वा जसले येशूको फिर्ताको मिति गणना गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्दछ। मैले भर्खरै रब्बीको खाता देखे जुन नोस्ट्राडामसको भविष्यवाणी तोरहसँग जोड्न सक्षम भएको भनियो। अर्को व्यक्तिले भविष्यवाणी गरे कि येशू पेन्टेकोस्ट २०१ at मा आउनुहुनेछ। धेरै भविष्यवाणी प्रेमीहरूले ब्रेकिंग न्यूज र बाइबलीय भविष्यवाणी लाई जोड्न कोशिश गर्छन्। कारक बार्थले मानिसहरूलाई खोज्दा धर्मशास्त्रमा दृढतापूर्वक लंगर रहन सल्लाह दिए ...
रिजोलुसन वा प्रार्थना
नयाँ वर्ष फेरि सुरु भएको छ। धेरै मानिसहरूले नयाँ वर्षको लागि राम्रा रिजोलुसनहरू गरे। प्राय: यो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको बारेमा हुन्छ - विशेष गरी छुट्टिको समयमा खाने र पिउने विशेष गरी। विश्वभरका मानिसहरू अधिक व्यायाम गर्न, कम मिठाईहरू खाने र सामान्य रूपमा अझ राम्रो गर्न चाहने प्रतिबद्ध छन्। त्यस्ता निर्णयहरू गर्नुमा कुनै गलत छैन, तर हामी मसीहीहरूसँग यस दृष्टिकोणमा केही कुराको अभाव छ।
यी रिजोलुसनहरूको सबैमा हाम्रो मानवीय इच्छाशक्तिसँग केहि सम्बन्ध छ, त्यसैले तिनीहरू प्रायः बाहिर जान्छन्। वास्तवमा ...
येशूको कुमारी जन्म
येशू, परमेश्वरको सदासर्वदा पुत्र, एक मानिस बन्नुभयो। यो बिना नै, कुनै वास्तविक इसाईमत हुन सक्दैन। प्रेरित यूहन्नाले यो कुरा यसरी लेखेः यसबाट तपाईंले परमेश्वरको आत्मालाई चिन्नु पर्छ: येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभएको हो भनेर स्वीकार्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाटको हो। र येशूलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाटको होइन। र यो ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो, जसको बारेमा तपाईंले सुन्नुभएको छ कि उहाँ आउनुहुनेछ, र उहाँ पहिले नै संसारमा हुनुहुन्छ (१ यूहन्ना ,,२--1)।
येशूको कुमारी जन्म वर्णन गर्दछ कि परमेश्वरको पुत्रको समयमा पूर्ण मानव भयो ...
जबकि भगवान्‌को अद्भुत क्षमा मेरो मनपर्ने विषयहरू मध्ये एक हो, मैले स्वीकार गर्नै पर्छ कि यो कत्तिको वास्तविक हो भनेर बुझ्न थाल्नु पनि गाह्रो छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई शुरुदेखि नै आफ्नो उदार उपहारको रूपमा डिजाइन गर्नुभयो, उहाँको पुत्रमार्फत क्षमा र मेलमिलापको एउटा अत्यन्तै क्रयात्मक कार्य, जुन उहाँ क्रूसमा मर्नुभयो। नतिजा स्वरूप, हामी केवल निर्दोष हुन्छन् मात्र, हामी पुनःस्थापित हुन्छौं - हाम्रो मायालु त्रिएक परमेश्वरसँग "लाइनमा ल्याइएको"।
उनको पुस्तक "प्रायश्चित: व्यक्ति र कामको ख्रीष्ट" मा [dt: मेलमिलाप: ख्रीष्ट र व्यक्ति को काम] छ ...
सेप्टेम्बर २० मा, यहूदीहरूले नयाँ साल मनाए, जुन धेरै अर्थ भएको चाड हो। त्यसोभए एक जनाले वार्षिक चक्रको शुरुआत मनाउँछ, आदम र हव्वाको सृष्टिको सम्झना गर्दछ र यसले ब्रह्माण्डको सृष्टिको सम्झना गर्दछ, जसमा समयको शुरुवात समावेश छ। जब मैले समयको बारेमा पढें, मैले सम्झें कि समयको पनि थुप्रै अर्थहरू छन्। ती मध्ये एउटा समय भनेको एक सम्पत्ति हो जुन अरबपतिहरू र भिखारीहरू सँगै हुन्छन्। हामी सबैको दिनमा 20 86.400,,०० सेकेन्ड छ। तर हामी यो बचत गर्न सक्दैनौं (समय ओभरड्राn वा फिर्ता लिन सकिन्न), ...
परमेश्वर सबै मानिसहरूलाई माया गर्नुहुन्छ
फ्रेडरिक नित्शे (१ 1844-1900-१ ०)) उनको विश्वासको आलोचनात्मक आलोचनाको कारण "परम नास्तिक" भनेर चिनिन थाल्यो। उनले दाबी गरे कि क्रिश्चियन धर्मशास्त्र, विशेष गरी प्रेमको कारणले यो गिरावट, भ्रष्टाचार र बदलाको उपज हो। परमेश्वरको अस्तित्वलाई सम्भव तुल्याउन थाल्नुको साटो उनले आफ्नो अहिलेको प्रख्यात भनाइ "परमेश्वर मरिसकेका" भनेर घोषणा गरे कि परमेश्वरको महान विचार मरे। उनले पारम्परिक इसाई विश्वासलाई (जसलाई उनले पुरानो मृत विश्वास भनिन्छ) प्रतिस्थापन गर्ने योजना गरेका थिए ...
हाम्रो संस्कृतिमा, चमत्कार शब्द प्रायः एकदम हल्का प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि, यदि एक टोलीले आश्चर्यजनक रूपमा फुटबल खेलको विस्तारमा २० मिटर शट विच्छेद गर्दै गोल गर्न सफल भयो भने, केही टेलिभिजन कमेन्टर्सले चमत्कारको बारेमा कुरा गर्न सक्दछन्। एक सर्कस प्रदर्शनमा, निर्देशकले एक कलाकार द्वारा चार गुणा चमत्कार समरसोल्टको घोषणा गर्दछ। खैर, यो धेरै चमत्कार हो कि यो चमत्कार हो, बरु शानदार मनोरन्जन।
एक चमत्कार एक अलौकिक घटना हो जुन अन्तर्निहित माध्यमबाट देखा पर्दछ ...
तपाइँ आफ्नो जागरूकता बारे के सोच्नुहुन्छ?
यसलाई दार्शनिकहरू र ईश्वरविद्हरूका बीचमा दिमाग-शरीर समस्या (शरीर-आत्मा समस्या) पनि भनिन्छ। यो राम्रो मोटर समन्वयको समस्याको बारेमा होइन (जस्तो कि कुनै चीज नछोडी वा गलत तरिकाले डार्टहरू फ्याँक्दा कपबाट सिप्स पिउनु)। यसको सट्टा, प्रश्न यो छ कि हाम्रो शरीरहरू शारीरिक छन् र हाम्रो विचारहरू आध्यात्मिक छन् कि छैन; वा यसलाई अर्को तरिकामा राख्न, मानिसहरू शुद्ध रूपमा शारीरिक छन् वा शारीरिक र आध्यात्मिकको संयोजन।
यद्यपि बाइबलले दिमाग-समस्याको समस्यालाई सीधा सम्बोधन गर्दैन, यसले स्पष्ट सन्दर्भ समावेश गर्दछ ...
के मोशाको व्यवस्था पनि मसीहीहरूलाई लागू हुन्छ?
टेमी र म विमानस्थलको लबीमा हाम्रो फ्लाइट होममा तुरुन्तै पर्खंदै गर्दा मैले एक जना जवान मानिसलाई देखे जो दुई सीट बसिरहेका थिए र मलाई हेर्दै थिए। केहि मिनेट पछि उनले मलाई सोधे, "माफ गर्नुहोस्, के तपाई श्री जोसेफ टाकाच हुनुहुन्छ?" उहाँ मसँग कुरा गरेर खुसी हुनुभयो र मलाई बताउनुभयो कि उनलाई भर्खरै साब्बटेरियन मण्डलीबाट निकालिएको थियो। हाम्रो कुराकानी चाँडै नै परमेश्वरको व्यवस्थामा बदलियो - उनले मेरो कथन एकदमै चाखलाग्दो पाए कि मसीहीहरूले त्यो भगवानलाई बुझ्नेछन् ...
येशू पवित्र आत्माको बारेमा के भन्नुहुन्छ
म कहिलेकाँही विश्वासीहरूसँग बोल्दछु जो पिता र पुत्र जस्ता पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो लाग्छ - उहाँ त्रिएकका तीन व्यक्तित्वहरू मध्येका एक हुनुहुन्छ। सामान्यतया, म धर्मशास्त्र उदाहरण प्रयोग गर्ने गुण र कार्यहरू देखाउन जसले पिता र पुत्रलाई व्यक्तिको रूपमा पहिचान गर्दछ र पवित्र आत्मालाई एक व्यक्तिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यसपछि म बाइबलमा पवित्र आत्माले उल्लेख गरेको धेरै शीर्षकहरू उल्लेख गर्दछु। र अन्तमा, म पवित्र आत्माको बारेमा येशूले जे सिकाउनुभएको थियो म भित्र जान्छु। यसमा ...
क्षमा: एक महत्त्वपूर्ण कुञ्जी
उनलाई केवल सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावनाको इरादाको साथ, म बर्मी किंग (तपाईंको स्वाद अनुसार) लाई खाना खानको लागि टेमी (मेरी श्रीमती) सँग गएँ, त्यसपछि डेजर्टको लागि डेअरी क्वीनमा (केहि फरक)। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि कम्पनीको नाराको चर्को प्रयोगको बारे म लज्जित हुनुपर्दछ, तर उनीहरूले म्याकडोनाल्ड्समा भनेका छन्: "मलाई यो मन पर्छ"। अब मैले तपाइँ (र विशेष गरी टेमी!) माफी माग्नु पर्छ र त्यो मूर्ख चुटकुले अलग राख्नु भयो। क्षमा स्थायी र सजीव छन् कि सम्बन्ध बनाउन र सुदृढ बनाउन मा एक कुञ्जी हो। यो बिचको सम्बन्धमा लागू हुन्छ।
छिमेकीको सेवा गर्नबाट
बाइबलको the 66 वटा पुस्तकमध्ये एउटा, नहेम्याहको पुस्तक सायद कमै देखिएको हो। यसमा साल्टर जस्ता हार्दिक प्रार्थनाहरू र गीतहरू छैनन्, उत्पत्तिको पुस्तक जस्तो उत्पत्ति (उत्पत्ति) को जस्तो सृष्टिको कुनै ठूलो विवरण छैन, र येशू वा पावलको धर्मशास्त्रको कुनै जीवनी छैन। यद्यपि, परमेश्वरको प्रेरित वचनको रूपमा यो हाम्रोलागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। पुरानो नियमको पछाडि हिंड्दा यसलाई सजिलै बेवास्ता गरिन्छ, तर हामी यस पुस्तकबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौं - विशेष गरी साँचो एकता र अनुकरणीय जीवनको बारेमा।
नहेम्याहको पुस्तक हुन्छ ...
नयाँ नास्तिकताको धर्म
अ In्ग्रेजीमा, "द लेडी, यो मलाई देखिन्छ," [पुरानो अ protests्ग्रेजी: विरोध] धेरै प्रशंसा गरिएको "भन्ने लाइन अक्सर शेक्सपियरको ह्यामलेटबाट उद्धृत गरिएको छ, जसले कसैलाई अरुलाई सत्य कुराको लागि मनाउन खोजेको वर्णन गर्दछ। यो वाक्यांश मनमा आउँछ जब म नास्तिकहरुबाट नास्तिकवाद भनेको एक धर्म हो भनेर विरोध गरेको सुनें। केही नास्तिकहरू तिनीहरूको विरोधलाई निम्न sylogistic तुलनासँग समर्थन गर्दछन्।
यदि नास्तिकता धर्म हो भने, “ट्यान्डनेस” कपालको रंग हो। यद्यपि यो लगभग गहन लाग्न सक्छ, त्यहाँ एक मात्र छ ...
कृपया यो पनि विचार गर्नुहोस् कि व्यक्तिहरूसँग अहिलेसम्म ...
सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस उपस्थित
प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर २th मा, इसाई धर्मले भर्जिन मरियमबाट जन्मेको येशू, परमेश्वरको पुत्र, को जन्म मनाउँछ। बाइबलले सही जन्म मितिको बारेमा कुनै जानकारी दिदैन। येशूको जन्म सम्भवतः जाडोमा भएन जब हामी यो मनाउँछौं। लूका रिपोर्ट गर्दछन् कि सम्राट अगस्टसले आदेश दिए कि सम्पूर्ण रोमी संसारका बासिन्दाहरूलाई कर रेजिस्टरमा दर्ता गर्नुपर्दछ (Lk २.१) र "सबै जना दर्ता गराउन आफ्नो शहर गए", जोसेफ र मरियमलगायत, जो गर्भवती थिए (Lk २ 25,--2,1)। केही विद्वानहरु मा येशूको वास्तविक जन्मदिन छ ...
मलाई चिन्ने सबैले जान्दछन् कि म शर्लक होम्सको कल्ट फिगरको महान प्रशंसक हुँ। म आफैंले स्वीकार गर्न चाहेको भन्दा बढी होम्स व्यापारिक वस्तुको म हुँ। म लन्डनमा २२१ बी बेकर स्ट्रीटमा शेरलॉक होम्स संग्रहालय धेरै चोटि भ्रमण गरिसकें। र पक्कै पनि मलाई यो धेरै मनमोहक चरित्रको बारेमा बनाइएको फिल्महरू हेर्न रमाईलो लाग्छ। म पछिल्लो बीबीसी निर्माणको नयाँ एपिसोडहरूको प्रतिक्षा गर्दैछु, जसमा फिल्म स्टार बेनेडिक्ट कम्बरब्याचले प्रसिद्ध जासूस, एक काल्पनिक चरित्रको भूमिका खेल्छन् ...
येशू हाम्रो मेलमिलाप हुनुहुन्छ
धेरै वर्षसम्म मैले योम किप्पुर (जर्मन: प्रायश्चितको दिन) मा उपवास गरें, सबैभन्दा उच्च यहूदी उत्सव दिन। मैले गलत विश्वास गरेकोले मलाई विश्वास थियो कि म परमेश्वरसँग मेलमिलाप भएको थिएँ त्यस दिन कडा परिश्रम गरेर भोजन र तरल पदार्थहरू द्वारा। हामी मध्ये धेरैले अझै यो गलत सोच्ने तरिका सम्झन सक्छौं। जुनसुकै यो हामीलाई बुझाइएको थियो, योम किपुरमा उपवास बस्नको अभिप्राय हाम्रो आफ्नै कार्यहरूमार्फत परमेश्वरसँगको मेलमिलाप (छोराको रूपमा ग्रहण) मा समावेश थियो। हामीले अनुग्रह प्लस काम गर्ने धार्मिक प्रणालीको अभ्यास गर्‍यौं - र ...
तुरही दिन: ख्रीष्टमा भोज पूरा भयो
सेप्टेम्बरमा (यस वर्ष अपवाद अक्टोबर on मा) यहूदीहरूले नयाँ वर्षको दिवस मनाउँथे, "रोश हशनाह", जसको अर्थ हो हिब्रूमा "वर्षको प्रमुख"। यो यहूदीहरूको परम्पराको भाग हो कि उनीहरू माछाको टाउकोको टुक्रा खाउँदछन् जुन बर्षको टाउकोको प्रतीक हो, र एक अर्कालाई "लेस्चाना तोवा", जसको अर्थ हो "राम्रो वर्ष हो!" परम्परा अनुसार, चाडको दिन रोश हशनाह र सृष्टिको हप्ताको छैठौं दिनको बीचमा सम्बन्ध छ, जुनमा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो।
मोशा २ 3:२:23,24 को तेस्रो पुस्तकको हिब्रू पाठमा दिन "सिक्रोन तेरुआ" को रूपमा दिइएको छ।
प्रार्थना - केवल शब्द भन्दा धेरै
मानौं तपाईंले निराशाको समय देख्नु भएको छ जब तपाईं हस्तक्षेप गर्नको लागि परमेश्वरलाई बिन्ती गर्नुहुन्छ। तपाईंले चमत्कारका लागि प्रार्थना गर्नुभएको हुन सक्छ, तर स्पष्टतया यसको कुनै उपयोग भएन; चमत्कार पूरा भएन। त्यस्तै गरी, म अनुमान लगाउँछु कि तपाईलाई यो थाहा पाउँदा खुशी भयो कि एक व्यक्तिको च for्गाइको लागि प्रार्थनाहरूको उत्तर दिइयो। म एक महिलालाई चिन्छु जसको पसलहरू निको हुनको लागि प्रार्थना पछि फिर्ता हुन्थ्यो। डाक्टरले उनलाई सल्लाह दिएका थिए: "तपाइँ जे पनि गर्नुहोस्, जारी राख्नुहोस्!" हामी धेरैलाई म पक्का छु, सान्त्वना र प्रोत्साहित छौं किनभने हामीलाई थाहा छ कि ...
सुसमाचार - एक ब्रान्ड गरिएको वस्तु?
उनको प्रारम्भिक चलचित्रहरूमा जोन वेनले अर्को काउबائےलाई भने, "मलाई ब्रान्डि iron फलामको साथ काम गर्न मन पर्दैन - तपाईं गलत ठाउँमा हुँदा यो दुख्छ!" मैले उनको टिप्पणी एकदम रमाईलो पाएँ, तर त्यसले मलाई पनि बनायो। ब्रान्ड गरिएका उत्पादनहरूको गहन पदोन्नति जस्ता विपणन प्रविधिको अनुचित प्रयोग मार्फत चर्चहरूले कसरी सुसमाचारलाई क्षति पुर्‍याउँछन् भनेर सोच्नुहोस्। हाम्रो विगतमा हाम्रो संस्थापकले कडा बेच्ने बिन्दु खोजे र हामीलाई "केवल साँचो चर्च" बनायो। यो दृष्टिकोण बाइबलीय समझौता ...
मातृत्व को उपहार
ईश्वरको सृष्टिमा मातृत्व भनेको सबैभन्दा ठूलो कार्य हो। त्यो मलाई फर्केर आयो जब म हालै मेरी आमा र सासुलाई आमाको दिनका लागि के दिने भनेर सोचमा थिएँ। मेरी बहिनी र मलाई उहाँकी आमा हुन पाउँदा खुसी लाग्यो भन्नुहुँदा मेरी आमाले भनेका शब्दहरू मलाई सम्झन सकिनँ। हामीलाई जन्म दिइसकेपछि, उनी पूर्ण रूपमा परमेश्वरप्रतिको प्रेम र महानता बुझ्नुहुने थियो। मैले केवल यो बुझ्न थाल्न सक्छु कि जब हाम्रा आफ्नै बच्चाहरू जन्मेका थिए। मलाई अझै पनी याद छ कि जब मेरी श्रीमती टेमी दुखिरहेकी थिइन म कति छक्क परें ...
यहाँ हरेक फेब्रुअरी संयुक्त राज्य अमेरिका मा, कालो इतिहास महीना मनाईन्छ। यस समयमा, हामी अफ्रिकी अमेरिकीहरूले हाम्रो देशको भलाइमा योगदान पुर्‍याएका धेरै उपलब्धिहरू मनाउँछौं। दासत्व र जातीय बिभिन्नताबाट निरन्तर जातिय भेदभाव सम्म हामी अन्तर्देशीय कष्टको सम्झना गर्दछौं। यस महिना मैले महसुस गरें कि चर्चमा एउटा इतिहास छ जुन प्राय: बेवास्ता गरिएको छ - महत्वपूर्ण भूमिका जुन आरम्भिक अफ्रिकी अमेरिकी चर्चहरूले खेलेको ...
येशू मुक्ति को सिद्ध काम
आफ्नो सुसमाचारको अन्त्यतिर प्रेरित यूहन्नाका यी मनमोहक टिप्पणीहरू पढ्न सकिन्छ: “येशूले आफ्ना चेलाहरूका अगाडि अरु धेरै चिन्हहरू गर्नुभयो जुन यस पुस्तकमा लेखिएको छैन [...] तर यदि एउटा एक गरेर लेखिएको भए, तब मलाई लाग्छ कि पुस्तकहरूले लेख्न आवश्यक पर्ने पुस्तकहरू बुझ्न सक्दैनन् "(जेएन २०::20,30०; २१:२:21,25)। यी टिप्पणीहरूको आधारमा र चार सुसमाचारका बीचका भिन्नताहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि उल्लेखित प्रतिनिधित्वहरू येशूको जीवनको पूर्ण ट्रेसको रूपमा लेखिएको छैन ...
प्रायः जब म यात्रा गर्दछु मलाई ग्रेस कम्युनियन अन्तर्राष्ट्रिय चर्च सेवाहरू, सम्मेलनहरू, र बोर्ड बैठकहरूमा सम्बोधन गर्न भनियो। कहिलेकाँही मलाई अन्तिम आशिष दिन पनि भनिएको हुन्छ। म अक्सर हारूनको आशिष् मा फर्कन्छु, जुन उनले इस्राएलीहरूलाई प्रदान गरेको थियो (वर्षमा इजिप्टबाट उडान पछि र उनीहरू प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा प्रवेश गर्नु भन्दा धेरै अघि मरुभूमिमा)। त्यसबेला परमेश्‍वरले इस्रायलीहरूलाई व्यवस्था कसरी पालन गर्ने भनेर सिकाउनुभयो। मानिसहरु अस्थिर थिए र बरु निष्क्रिय थिए (आखिर, तिनीहरू सबै जीवनको दास थिए ...
एड्भेन्ट र क्रिसमस मौसम एक विचारशील समय हो। येशू र उहाँको अवतार मा प्रतिबिम्ब को एक समय, आनन्द, आशा र प्रतिज्ञा को समय। संसारभरका मानिसहरु उनको जन्म घोषणा गर्छन्। एउटा क्रिसमस क्यारोल पछि अर्को ईथरको आवाजमा सुन्छ। चर्चहरूमा, उत्सव जन्म नाटकहरू, क्यान्टाटास र कोरल गायनको साथ मनाइन्छ। यो वर्षको त्यो समय हो कि सारा संसारले येशू मसीहको बारेमा सत्य कुरा सिक्दछ भन्ने सोच्दछ।
तर दुर्भाग्यवस धेरैले क्रिसमसको पूर्ण अर्थ बुझेनन् र तिनीहरूले उत्सव मनाउँछन् ...
जब मैले साइकोलोजी टुडे लेखमा खुशीको लागि यो वैज्ञानिक सूत्र देखें, तब म ठूलो स्वरले हाँसेँ।
यद्यपि यो बेतुका सूत्रले क्षणिक खुशीको उत्पादन गर्‍यो, यसले चिरस्थायी आनन्द उत्पन्न गर्दैन। कृपया यो गलत नहुनुहोस्; म अरू सबै जस्तै राम्रो हाँसोको मजा लिन्छु। त्यसकारण म कार्ल बार्थको भनाइलाई कदर गर्दछु: "हाँसो; परमेश्वरको अनुग्रहको सब भन्दा नजिकको चीज हो। “दुबै सुख र आनन्दले हामीलाई हाँस्न सक्छ भने पनि ती दुई बिचको भिन्नता छ। एक फरक जुन मैले धेरै बर्ष पहिले अनुभव गरें जब मेरो ...
येशू हिजो, आज र सधैंभरि
कहिलेकाँही हामी क्रुसमसको उत्सवमा परमेश्वरको पुत्रको अवतारमा जान्छौ जुन उत्साहको साथ हामी एडभेन्टलाई पछाडि सीटमा बस्न दियौं, जुन समयदेखि इसाई चर्चको वर्ष सुरू हुन्छ। एड्भेन्टको चार आइतवारहरू यस वर्ष नोभेम्बर २ th मा शुरू हुन्छन् र क्रिष्टमस, येशू ख्रीष्टको जन्मको पर्व, हेराल्ड्स क्रिसमसको शुरुवात हुन्छ। "एड्भेन्ट" शब्द ल्याटिन एड्भेन्टसबाट आएको हो र यसको अर्थ "आउने" वा "आगमन" जस्तो हुन्छ। एड्भेन्टमा येशूको तीन "आगमन" मनाइन्छ (सामान्यतया उल्टो क्रममा): ...
प्रकाश, भगवान र अनुग्रह
एक जवान किशोरीको रूपमा, म एक चलचित्र थिएटरमा बसिरहेको थिएँ जब शक्ति सकियो। अन्धकारमा, दर्शकहरूको गनगनाउने आवाज बढ्दै जाँदा हरेक सेकेन्डमा जोडिए। मैले याद गरे कि कसैले कसरी बाहिरबाट ढोका खोल्ने बित्तिकै मैले श susp्कास्पद रूपमा बाहिर निस्कने प्रयास गर्न खोजेको थिएँ। लाइट चलचित्र थिएटरमा गयो र गनगन र मेरो संदिग्ध खोजी छिटो सकियो।
जबसम्म हामी अन्धकारको सामना गर्दैनौं, हामी धेरै जसो प्रकाशलाई हल्का रूपमा लिन्छौं। यद्यपि प्रकाश बिना त्यहाँ देख्न को लागी केहि छैन। हामी केवल केहि देख्दछौं जब प्रकाशले कोठालाई उज्यालो बनाउँदछ। कहाँ यो ...
परमेश्वरको अनुग्रहमा ध्यान केन्द्रित रहनुहोस्
मैले भर्खर एउटा टिभी विज्ञापनलाई विडंबन गर्ने भिडियो देखेको छु। यस मामलामा, यो "यो सबै मेरो बारेमा छ" शीर्षकको काल्पनिक ईसाई पूजा सीडीको बारेमा थियो। यस सीडीमा गीतहरू थिए: "भगवान मैले उच्चमा मेरो नाम लिफ्ट", "म एक्स्टल मी" र "म जस्तो अरू कोही छैन"। (कोही पनि म जस्तो छैन)। अनौंठो? हो, तर यो दुखद सत्य चित्रण गर्दछ। हामी मानिसहरु परमेश्वर भन्दा आफैलाई पूजा गर्छौं। मैले पछिल्लो पटक भनें, यो प्रवृत्तिले हाम्रो आध्यात्मिक गठनलाई सर्ट सर्किटमा ...
तपाईं धेरैलाई थाहा छ कि जब म यात्रा गर्दैछु, म स्थानीय भाषामा मेरो आदर भन्न चाहन्छु। म साधारण "हेलो" भन्दा पर जान खुसी छु। कहिलेकाँही, भाषाको उपद्रव वा सफाईले मलाई भ्रमित गर्दछ। यद्यपि मैले विभिन्न भाषामा केहि शब्दहरू र केही ग्रीक र हिब्रूहरू अध्ययनको क्रममा मैले सिकेको छु, अ English्ग्रेजी मेरो हृदयको भाषा हो। त्यसोभए यो मैले प्रार्थना गरेको भाषा पनि हो।
जब म प्रार्थनाको बारेमा सोच्दछु, म एक कथा सम्झन्छु। त्यहाँ एक मानिस थियो जसले उसले सकेको ईच्छा गरे ...
धर्मशास्त्र हाम्रोलागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले हाम्रो विश्वासको ढाँचा प्रदान गर्दछ। यद्यपि इसाई समुदायमा पनि धेरै नै ईश्वरतान्त्रिक धारहरू छन्। एउटा विशेषता जुन WKG / GCI लाई एक धार्मिक समुदायको रूपमा सत्य छ "त्रिएकवादी ईश्वरशास्त्र" को रूपमा वर्णन गर्न सकिने कुराप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यद्यपि चर्च इतिहासभरि त्रिएकको शिक्षालाई व्यापक मान्यता दिइएको छ तर कोही-कोहीले यसलाई "बिर्सिएका सिद्धान्त" भनेर सम्बोधन गरेका छन् किनकि यसलाई प्राय: बेवास्ता गर्न सकिन्छ। जे होस्, हामी WKG / GCI मा विश्वास गर्छौं कि वास्तविकता, अर्थात् ...
हाम्रो बप्तिस्माको मूल्यांकन
हामी हिज्जे हावालाई हेर्दछौं कि जादुगर, सा .्गलामा बाँधे र प्याडलॉकहरू द्वारा सुरक्षित, एउटा ठूलो पानी ट्या tank्कीमा कसरी तल झुकियो। त्यसपछि शीर्ष बन्द छ र जादुगरको सहायक माथि खडा हुन्छ र ट्या cloth्कलाई कपडाले कभर गर्दछ, जुन उनीले आफ्नो टाउको माथि उठाईन्। केहि क्षण पछि कपडा खस्छ र हाम्रो आश्चर्य र खुशीको लागि जादुगर अहिले ट्या tank्कमा उभिरहेको छ र उसको सहयोगी, चेन द्वारा सुरक्षित, भित्र छ। यो अचानक र रहस्यमय "विनिमय" हाम्रो आँखाको ठीक अगाडि हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ एक ...
येशूको पुनरुत्थान मनाउनुहोस्
प्रत्येक वर्ष इस्टर आइतवार, क्रिश्चियनहरू संसारको चारै तिर जम्मा हुन्छन् येशूको पुनरुत्थानको उत्सव मनाउन। केही व्यक्ति पारंपरिक अभिवादनको साथ एक अर्कालाई अभिवादन गर्छन्। यो भनाइ पढिएको छ: "ऊ बौर्यो!" जवाफमा, जवाफ यस्तो छ: "ऊ साँच्चिकै उठेको छ!" मलाई मन पर्छ कि हामी यस तरिकाले शुभ समाचारहरू मनाउँछौं, तर यस अभिवादनको लागि हाम्रो प्रतिक्रिया केही सतही हुन सक्छ। यो लगभग "यस्तै के भयो" जस्तो छ? थप्ने थियो त्यसले मलाई सोच्न बाध्य तुल्यायो।
धेरै वर्ष अघि मैले आफैलाई प्रश्न गरेपछि के म पुनरुत्थान लिइरहेको छु ...
जब मानिसहरूले "म यो देख्न सक्तिनँ, म विश्वास गर्दिनँ" भनेर भन्छु म यो अद्भुत महसुस गर्छु। "म यो प्रायः सुन्छु जब मानिसहरूले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर शंका गर्छन् वा उहाँले सबै मानिसहरूलाई उहाँको अनुग्रह र कृपामा समावेश गर्नुहुन्छ। अपमान नगर्न को क्रममा, म औंल्याउँछु कि हामी चुम्बकत्व वा बिजुली देख्दैनौं, तर थाहा छ कि ती उनीहरूको प्रभावको माध्यमबाट अवस्थित छन्। हावा, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, र विचारको पनि त्यहि हो। यस तरिकाले हामी अनुभव गर्छौं "छविविहीन ज्ञान"। म यस्तो ज्ञानमा भर पर्न चाहन्छु ...
नयाँ बर्षको शुभकामना! आशा छ तपाईको प्रियजनहरु संग छुट्टीको समय थियो। अब जब क्रिसमसको मौसम हाम्रो पछाडि छ र हामी नयाँ वर्षमा कार्यालयमा फिर्ता आएका छौं, म त्यस्तै अवस्थामा पनि हाम्रा कर्मचारीहरूसँग बिदाको बारेमा बिचारहरू आदानप्रदान गर्दछु। हामीले पारिवारिक परम्परा र पुरानो पुस्ताले अक्सर हामीलाई कृतज्ञताका बारे सिकाउन सक्छ भन्ने तथ्यको बारेमा कुरा गर्‍यौं। एक अन्तर्वार्तामा, एक कर्मचारीले एक प्रेरणादायक कथा उल्लेख गरे।
यो उनको हजुरबा हजुरआमा संग सुरु भयो जो ...
गत महिना, धेरै GCI पादरीहरू ग्रेस कम्युनियन इन्टरनेसनलका लागि नेशनल गोस्पल कोआर्डिनेटर हेबर टिकासको नेतृत्वमा "दीवारहरू बाहिर" भन्ने हातमा प्रचार कार्यक्रममा भाग लिए। यो टेक्सासको डलास नजिकै रहेको हाम्रो एउटा गन्तव्य पाथवेज ग्रेसको साझेदारीमा गरिएको थियो। प्रशिक्षण शुक्रबार पाठबाट सुरू भयो र शनिबार बिहान पनि जारी रह्यो। पास्टरहरूले मण्डलीका सदस्यहरूसँग भेट गरे जुन चर्चको सभाको बिन्दुमा घरघर जान्छन् र ...
हाम्रो खातिर परीक्षामा पर्‍यो
धर्मशास्त्रले हामीलाई बताउँछ कि हाम्रो प्रधान पुजारी येशू "हामी जस्तो सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, तर कुनै पाप बिना" (हिब्रू :4,15:१)। यो महत्त्वपूर्ण सत्य ऐतिहासिक इसाई सिद्धान्तमा झल्किन्छ, जसको अनुसार, येशू, आफ्नो अवतारमा, एक विसार समारोह ग्रहण गर्नुभयो।
ल्याटिन शब्दको शब्द भेसेरियसको अर्थ "कसैको लागि प्रतिनिधि वा राज्यपालको रूपमा कार्य गर्नु" हो। उहाँको अवतार संग, परमेश्वरको अनन्त पुत्र मानव भएर आफ्नो देवीत्वको रक्षा गर्दै मानव बन्नुभयो। यस सन्दर्भमा, क्याल्भिनले "चमत्कारी आदानप्रदान" को कुरा गरे।
हाम्रो त्रिएक परमेश्वर: जीवित प्रेम
सबैभन्दा पुरानो जीवित प्राणीको बारेमा सोध्दा, केहिलाई १००० वर्ष पुरानो तस्मानिया पाइन वा त्यहाँ बस्ने 10.000०,००० बर्ष पुरानो झुप्रोलाई जनाउन सक्छ। अरूले सोच्छन् कि २००,००० बर्ष भन्दा बढी पुरानो समुद्री समुद्री किनारमा स्पेनी बेलारिक टापुहरूको तटमा। यी बोटहरू जतिसुकै पुरानो हो, त्यहाँ केहि पुरानो हो - र त्यो शाश्वत परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो बाइबलमा जीवित प्रेमको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। भगवान्‌को सार प्रेममा प्रकट हुन्छ। ट्रिनिटी (ट्रिनिटी) को व्यक्तित्वहरू बीचको प्रेम जुन प्रेमको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले नै थियो ...